Hambalyo Ajay Devgn madaama filimkiisa Raid uu HIT dhameestiran noqday – Filimside.net
Taariikhda: April 6, 2018
Shabakada Boxoffice India ayaa xaqiijisay in Super Star Ajay Devgn filimkiisa ugu dambeeyay Raid uu HIT dhameestiran noqday madaama ganacsigiisa mudo sedex todobaad ah uu si wacan isku celiyay.
Raid ayaa todobaadkiisa sedexaad keenay 8.75 Crore (Trade Figure) wuxuuna sameeyay 65% hoos u dhac ah madaama filimka Baaghi 2 uu inta badan ka qabsaday tiyaatarada Single Screens ee uu horey kaga gadmaayay.
Laakiin Raid todobaadkiisa sedexaad ganacsiga uu sameeyay waa mid heer sare ah madaama uu ka badan yahay filimka weyn Singham Returns oo keenay 4.05 Crore todobaadkiisa sedexaad sanadii 2014.
Raid waa HIT sidoo kalena kooxda cajaladaha qeybiyaan saami ahaan waxay ka heli doonaan 45 Crore waana filimka lacagaha ugu badan soo xareeyay ee Ajay hogaamiye ka yahay balse Rohit Shetty uusan Director ka ahayn.
Fadlan hoos kaga bogo Raid mudo sedex todobaad ah ganacsiga uu sameeyay sida shabakada Boxoffice India soo daabacday:
Todobaadka sedexaad – 8.75 Crore (Qiyaas)
Wadarta Guud – 93.78 Crore (Trade Figure)
Dhinaca kale kooxda filimka Raid iska leh waxayn dhankooda shaaca ka qaadeen in mashruucaan 98.51 Crore (Producer Figure) uu soo xareeyay mudo sedex todobaad ah.
Shabakada BOI lacagaha ay baahineyso iyo lacagaha kooxda filimka Raid baahinayaan waxaa u dhaxeeyo farqi 5 Crore gaarayo sidaa darteed si muranka aan kaga fogaano anaga Filimside ahan waxaan qaadaneynaa lacagaha BOI baaheyso waana nidaam nagula yaqaanay sedexda sano oo ay shabakada jirtay.
100 crore ayaan sugaynaa usbuuca danbe.